पेटलाई स्वस्थ र बलियो बनाउन सके यस्ता छन् हजारौँ फाईदाहरु – Nepali online news portal
पेटलाई स्वस्थ र बलियो बनाउन सके यस्ता छन् हजारौँ फाईदाहरु
१२ श्रावण २०७८, मंगलवार २०:१६ July 27, 2021 पाथिभरा संवाददाता
हामी जस्तो खान्छौं, त्यस्तै बन्छौं । किनभने हामीले खाएको खानेकुराबाट नै हाम्रो शरीरका कोषहरु निर्माण हुने हो । खानेकुरा खाइसकेपछि हाम्रो पाचन यन्त्रले कसरी काम गर्छ ?
पाचनको प्रक्रिया मुखबाट सुरु हुन्छ, जहाँ दाँतले भोजनलाई पिसेर ¥यालमा रहेका इन्जाइम्सले यसलाई टुक्र्याउन सुरु गर्छ । पाचनतन्त्रले खानेकुरालाई सानो सानो टुक्रामा, जस्तै ग्लुकोज, एमिनो एसिड, फ्याटी एसिडमा तोड्छ । त्य त्यसपछि आधा पचेको भोजन हाम्रो सानो आन्द्रामा पुग्छ ।
सपश्चात यी पौष्टिक तत्व तपाईंको रगतमा समाहित हुन्छन् र शरीरका विभिन्न भागमा पुग्छन् ।
सँधै समयमा खाना खानुपर्छ । खाना बिस्तारै खानुपर्छ । बढिभन्दा बढि चबाएर मात्र निल्नुपर्छ । तपाईं अक्सर पेटको गडबडी वा अपचबाट पिडित हो भने खाना खाने समयलाई अलि अगाडि सार्नुपर्छ । सुत्नुभन्दा ३ देखि ४ घन्टा अगाडि खाना खाइसक्नुपर्छ ।
प्रो बायोटिक्स एक यस्तो ब्याक्टेरिया हो जसले पाचन तन्त्रलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । यो डायरिया र इर्रिटेबल बाउल सिन्ड्रोम जस्ता अवस्थाहरुमा पनि निकै सहयोगी सावित हुन सक्छ । यस्तो ब्याक्टेरियाले आन्द्राको अम्लतालाई बढाएर हानिकारक जीवाणूहरुको विकासलाई रोक्न मद्दत पु¥याउँछ । दहीमा प्रोबायोटिक्स हुने भएकाले यसको सेवन गर्नु फाइदाजनक हुनेछ ।
जडिबुटी र मसलाले भोजनमा स्वाद मात्रै बढाउँदैन, बल्कि यसले तपाईंको पाचनमा पनि सहयोग पु¥याउँछ । यसको स्वाद र गन्ध दुवै ग्यास्ट्रिक र ¥याल पैदा गर्न सहायक हुन्छ । उदाहरणका लागि धनिया, अदुवा, जिरा, मरिच, खुर्सानी र बेसारले तपाईंको पित्त अम्ललाई बढाएर कार्बोहाइड्रट र बोसोलाई पचाउन मद्दत पु¥याउन सक्छ ।
टुसा उमारेको खानेकुरा खान मन पर्छ ? यस्ता छन फाइदाहरु
काठमाडौंको तीनकुने पुलमुनि पुरुषको शव भेटियो
संक्रमण निरन्तर उकालो, आज मात्रै ३ हजार ८९९ संक्रमित